सोमबारका दिन गर्नुहोस यी ७ काम,हुन्छ तपाईको सम्पुर्ण दुःख हरण !! | सुदुरपश्चिम खबर
सोमबारका दिन गर्नुहोस यी ७ काम,हुन्छ तपाईको सम्पुर्ण दुःख हरण !!
आज सोमबार कुनैपनि कार्य गर्नको लागि सोमवार शुभ मानिन्छ । सोमबार जन्मिएका मानिस निकै राम्रो व्यवहार भएको, कुशल र मायालु व्यवहारका हुने शास्त्रमा लेखिएको छ । सोमवार घर बनाउने, विवाह गर्ने, नामकरण या विद्यासँग सम्बन्धित कुनै कार्य गरियो भने शुभ हुने विश्वास छ ।
हिन्दु धर्ममा आइतबारलाई ‘सूर्य देव‘को बार मानिन्छ। भने सोमबार ‘शिवजी‘को दिन हो। यस दिनमा शिवजीको पुजा– आरधना गरे शिवजी चाँडै नै खुसी हुने उल्लेख छ । यस दिनमा शिव मन्दिर गई विशेषतः ‘अर्धनारीश्वर पुजा’ गर्ने अनि ‘ऊँ नमः शिवाय’ मन्त्र जप्नुपर्दछ। अझै सोमबारको दिन शिवजीको पुजा गर्नेबेला शिवपुराण पढ्दा शिवजी प्रसन्न भई मागेको वर दिने विश्वास गरिन्छ।
कुमारी स्त्रीले राम्रो वर पाउनका लागि शिवजीको पुजा गर्ने गर्दछन् भने विवाहित स्त्रीले आफ्नो परिवारमा सुखशान्ती र पतिको लामो आयुको लागि शिवजीको पुजा गर्दछन्। यस दिन व्रत बस्दा एक छाक मात्रा खानुपर्दछ भने खानामा नुन÷तेल मिसाउन मनाही छ।
कष्ट हटाउन यसो गर्नुहोस्ः
१ शिवलाई जल या दूधको अभिषेक गर्नु राम्रो मानिएको छ ।
२ मानसिक, शारीरिक या आर्थिक क ष्ट छ भने कुलदेवताको पूजा गर्नुहोस् ।
३ चामल, दूध, चाँदी दान गर्नुहोस् ।
४ चन्द्रमाले क ष्ट दिएमा चाँदीलाई नदीमा बगाउनाले सबै कष्ट या सम स्याहरु बगेर जानेछ ।
५ खीर खानु पनि शुभ हुन्छ ।
६ जसको चन्द्रमा कमि छ त्यस व्यक्ति सेतो कपडा र चन्दनको सेतो टीका लगाउनुहोस् ।
७ चादीको औठी र सेतो मोती धारण गर्नाले पनि लाभ प्राप्त हुन्छ । (gnewsnepal बाट सभार)
क्रिकेट रंगशालालाई ५३ टिपर निर्माण सामग्री सहयोग !!
के हो पिसाब संक्रमण, कसरी थाहा पाउने ?